दक्षिण कोरियाले नेपालीलाई पनि कोरोना राहत बाँड्दै, राहतस्वरूप यति रकम पाउँदै – Eps Sathi
January 7, 2022 371
सिउल । दक्षिण कोरियाले को’रोनाबाट प्रभावित भई कामका कारण आयस्रोत घटेको भन्दै कोरियालीसहित विदेशी नागरिकलाई पनि को’रोना राहत बाँडिरहेको छ । कोरोना माहामारीका कारण दैनिक जीवनयापन गर्न अ’सहज भएकाले यहाँको ईन्छन उपमहानगर पालिकाले उपमहानगरभित्र बसोबास गर्ने कोरियाली नागरिकसहित विदेशीलाई पनि को’रोना राहत रकम बाँडिरहेको हो ।
राहत रकमअन्तर्गत एक लाख कोरियाली वन (झण्डै रु १० हजार) प्रदान गरिने छ । यो राहत कोरियामा रही एच २, एफ ४, एफ ५ र एफ ६ भिसावाहक नेपालीसहित सबै विदेशीले पाउन सक्ने छन् । यसलाई प्राप्त गर्न उपमहानगर पालिका वा वडा कार्यालयबाट अनलाइन वा अफलाइन फर्म भरेपश्चात आफ्नो ठेगानामा एउटा ‘ईन्छन इयोङ कार्ड’ सपिङ कार्ड प्राप्त हुनेछ । जुन कार्डबाट नगद निकाल्न भने पाइने छैन ।
यसबाट ईन्छन उपहानगर पालिकाभित्र रहेका सपिङ मलहरूबाट एक लाख कोरियाली वन बराबरका सामान किनमेल गर्न सकिन्छ । गत डिसेम्बर दोस्रो हप्तादेखि सुरु भएको नाम दर्ता र कार्ड बाँड्ने प्रक्रिया जनवरी अन्तिमसम्म चल्नेछ ।
कार्डमा भएको रकम मार्चभित्र खर्च गरिसक्नु पर्नेछ । नेपालीलगायत विदेशीले पनि यो रकम पाउने भनिए पनि ई ९ प्रवेशाज्ञा बाहकलाई भने नदिइने भएको छ । अधिकांश प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा ई ९ भएका कारण यसबाट लाभान्वित हुने प्रवासीहरू कम हुनेछन् ।
यद्यपि उक्त कार्ड प्रयोग गर्न सबैले पाउने र कार्डमा आफैँले पैसा राखेर अन्य समयमा किनमेल गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउन सकिने कुरा यहाँ लामो समयदेखि श्रम गरिरहेका नेपाली बीबी सिंहले बताए । रासस
Prevकोरियामा भएको भिषण आगलागीमा ३ जना अग्नि नियन्त्रकको गयो ज्यान
Nextसिबिटी परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुने मिती तोकियो, हेरौं कहिले हुँदैछ रिजल्ट?
कोरियामा कामदारको औषतमा प्रतिमहिना ३२ लाख कमाई, हेरौं कस्ता कम्पनीमा सबैभन्दा बढि कमाई रहेछ?
दक्षिण कोरियाबाट नेपालको सेयरबजारमा लगानी गर्नेहरुको संख्या बढ्दो
उत्तर कोरियामा भोकम’री, आफ्ना नागरिकलाई कम खान निर्देशन